को-रोनाको नयाँ संस्करणका कारण ६ मुलुकसँगको उडान सेवा बन्द, यस्ताे छ सुचि ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियको-रोनाको नयाँ संस्करणका कारण ६ मुलुकसँगको उडान सेवा बन्द, यस्ताे छ सुचि !
को-रोनाको नयाँ संस्करणका कारण ६ मुलुकसँगको उडान सेवा बन्द, यस्ताे छ सुचि !
को-रोनाको नयाँ संस्करणका कारण ६ मुलुकसँगको उडान सेवा बन्द, यस्ताे छ सुचि ! बेलायतले को- रोना भाइरसको नयाँ संस्करण पत्ता लागेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न छ मुलुकसँगको हवाइ सेवा बन्द गरेको छ ।
यही शुक्रवार मध्याह्न १२ बजेदेखि ती देशहरूलाई ख- तरापूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेर ती आवत जावत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री शाजिद जावेदले जानकारी दिनुभयो । ओमिक्रोन नाम दिइएको नयाँ संस्करणको को- रोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएका र भेटिन सक्ने ख- तरा रहेका देशहरुबाट हुने उडान बेलायतमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
नयाँ भाइरस आफ्नो देशमा नभित्रियोस भन्ने उद्धेश्यले बेलायतले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे, बोत्स्वाना, लेसेथो र इस्वाटीटीसँगका सबै उडानहरु स्थगित गरेको हो । अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म सो नयाँ भाइरस दक्षिण अफ्रिका, हङकङ र बोत्स्वाना गरी तीन देशमा कुल ५९ जनामा मात्रै पुष्टि भएको छ ।
अहिलेसम्म पुष्टि भएका मध्ये सबैभन्दा ख- तरापूर्ण भइरस भएकाले र अहिले खोपले पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले बेलैमा उच्च सतर्कता अपनाउनु परेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी पछिल्लो १० दिनभित्र ती देशमा गएर फर्किएका यात्रुलाई पनि बेलायत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।